Lufthansa Boeing 787-9 Dreamliner-kii ugu horreeyay oo loo magacaabo Berlin
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Lufthansa Boeing 787-9 Dreamliner-kii ugu horreeyay oo loo magacaabo Berlin
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Jarmalka Jebinta Wararka • Investments • News • Dadka • Technology • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka
Lufthansa Boeing 787-9 Dreamliner-kii ugu horreeyay oo loo magacaabo Berlin.
Lufthansa iyo caasimadda Jarmalka waxay leeyihiin xiriir dheer oo gaar ah. Shirkadda prewar waxaa lagu aasaasay Berlin 1926 waxayna mar labaad kacday si ay u noqoto mid ka mid ah shirkadaha diyaaradaha ee ugu horreeya adduunka. Ka dib dhammaadkii Dagaalkii Labaad ee Adduunka iyo 45 sano, kaliya diyaaradaha rayidka ah ee 'xulafada' ayaa loo oggolaaday inay ka degaan magaalada kala qeybsan.
Xafladda magacaabista rasmiga ah iyo duulimaadkii ugu horreeyay ee Lufthansa Boeing 787-9 ee ugu horreysa sannadka soo socda ayaa loo qorsheeyay sannadka dambe.
Lufthansa waxay ku dhawaaqday inay heli doonto wadar ahaan shan diyaaradood oo ah Boeing 787 Dreamliners sanadka 2022.
Isticmaalka shidaalka iyo qiiqa CO2 ee dayuuradaha dhaadheer ayaa boqolkiiba 30 ka hooseeya kuwii hore.
Caasimadda Jarmalka waxay heli doontaa safiir cusub “duulaya”: Lufthansa ayaa ugu magac dartay Boeing 787-9 kii ugu horreeyay “Berlin.” Xafladda magacaabista ayaa lagu wadaa inay dhacdo ka dib marka la keeno diyaaradda sanadka soo socda.
"Berlin”Waa kii ugu horreeyey ee shan Boeing 787-9 Dreamliners ah oo Lufthansa ku dari doonto maraakiibteeda sannadka 2022. Diyaaradda dhaadheer ee casriga ah waxay isticmaashaa celcelis ahaan 2.5 litir oo kerosene ah halkii rakaab iyo 100 kiiloomitir. Taasi waxay ku dhawaad ​​30 boqolkiiba ka yar tahay diyaaradihii hore. Qiiqa CO2 ayaa sidoo kale si weyn loo hagaajiyay.
Tan iyo 1960, Lufthansa ayaa caado u lahayd in ay diyaaradaheeda ugu magac darto magaalooyinka Jarmalka. Willy Brandt, Chancellor -ka Galbeedka Jarmalka dabayaaqadii 1960 -meeyadii iyo 70 -meeyadii, wuxuu maamuusay Lufthansa intii uu ahaa Duqa Galbeedka Berlin (1957–1966) isagoo magacaabay Boeing 707 kii ugu horreeyay ee diyaaradda.Berlin".
Dhawaan, Airbus A380 oo leh aqoonsiga diiwaangelinta D-AIMI wuxuu lahaa magaca sharafta leh ee caasimadda Jarmalka. Lufthansa Boeing 787-9 ee ugu horreysa-“Berlin”-waxaa loo diiwaangelin doonaa D-ABPA. Meesha ugu horreysa ee jadwalka u ah in qaaradda-qaaradaha Lufthansa ee 787-9 ay noqoto Toronto, xarunta maaliyadeed ee Canada iyo xarunta.
Lufthansa waxayna caasimadda Jarmalku leedahay xiriir dheer oo gaar ah. Shirkadda prewar waxaa lagu aasaasay Berlin 1926 -kii oo mar kale kacay si uu uga mid noqdo shirkadaha diyaaradaha ee ugu horreeya dunida. Ka dib dhammaadkii Dagaalkii Labaad ee Adduunka iyo 45 sano, kaliya diyaaradaha rayidka ah ee 'xulafada' ayaa loo oggolaaday inay ka degaan magaalada kala qeybsan.
Tan iyo markii la mideeyay, Lufthansa waxay u duuli jirtay Berlin in ka badan 30 sano, iyadoo aysan jirin koox kale oo duulimaad oo duullimaadyo aad u badan oo Berliners ah adduunka oo dhan tobankii sano ee la soo dhaafay sida Lufthansa iyo sidayaasha walaasheed. Waqtigan xaadirka ah, diyaaradaha Lufthansa Group waxay ku xiraan caasimadda Jarmalka ilaa 260 meelood oo adduunka oo dhan ah, ama duulimaad toos ah ama xiriir ka socda mid ka mid ah xarumaha badan ee kooxda.